नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको उपचारमा ‘रेमडिसिभिर’ सफल रहेको दाबी
विराटनगर, ३२ साउन । नेपालमा पनि इबोलाविरुद्धको औषधि ‘रेमडिसिभिर’को प्रयोग सफल भएको दाबी गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमण भएपछि उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएका विराट मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीमा ‘रेमडिसिभिर’को प्रयोगपछि स्वास्थ्यमा सुधार आएको बताइएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरूले रेमडिसिभिर दिइएका डा. कार्कीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन् ।
नेपालमा पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापी गरिएका डा. कार्कीले यो औषधि आफैले ल्याएका थिए । प्लाज्मा थेरापी र रेमडिसिभिरको प्रयोगबाट कोरोना संक्रमितको उपचार गरेका चिकित्सकहरूले यी दुवै विधि नेपालमा सफल भएको दाबी गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमित गम्भीर अवस्थाका विरामीमा प्रयोग गरिने ‘रेमडिसिभिर’ नेपालमा प्रयोग गर्नसमेत अनुमति दिइएको छ ।
रेमडिसिभरको कालोबजारी हुन थालेपछि सरकारले पनि यो औषधि प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले औषधि आयातका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले रेमडिसिभिरको प्रयोग क्लिनिकल अध्ययनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न सक्ने गरी अनुमति दिएको छ ।
विभिन्न देशमा चिकित्सकहरूले गम्भीर अवस्थामा पुगेका संक्रमितलाई दिइने रेमडिसिभिरले शरीरमा भाइरसलाई बढ्न चाहिने एन्जाइमलाई निष्क्रिय बनाउँछ । रेमडिसिभिर कोरोना भाइरसविरुद्ध अचूक औषधि नभए पनि यसको प्रयोगले कोरोना भाइरस संक्रमणपछि विकसित भएका लक्षणहरू हराउन १५ दिनबाट ११ दिनमा झरेको दाबी गरिएको छ ।